3° Manam-pahaizana sy be fanomezam-pahasoavana kanefa tia kely na mihonona amin’ny sitrany ahay
Kinga ny gasy, mora mandray zavatra, tia mianatra, mahiratra, ets. Teny faheno matetika hamaritana ny fahaizan’ny Malagasy ireo amin’ny sehatra isan-karazany misy azy. Fa firy no tafavoaka sy afaka mivelona tsara ara-dalàna amin’ny fanomezam-pahasoavana hananany? Firy no mijery lavitra sy mitrandraka an’ireny talenta ireny ka tafiditra amin’ny sehatra matihanina? Tsy vitsy amin’ny Malagasy rahateo no manimba ny ho aviny amin’ilay toe-tsaina “tia kely” ka mamadika fitokisana amin’ny zavatra tsy misy dikany. Ao koa no tsy sahy miandrandra zavatra lehibe loatra eo amin’ny fiainany fa mihonona amin’ny sitrany ahay. Na isika samy isika azy tsy manome lanja ny vitan’ny hafa. Firy amintsika no tratran’ ilay fandrika fahita matetika ka raha misy tera-tany Malagasy sy vahiny mitovy fari-pahaizana eo dia ilay vahiny no manana lanja kokoa eo imasontsika noho ilay Malagasy? Mampandry ny saintsika ny manome karama avo 5 heny tera-tany vahiny iray noho ny Malagasy iray amin’ny asa mitovy.
4° Mitaky fiainana manara-penitra kanefa goragora
Maniry fiainana milamina sy mandeha araka ny tokony ho izy isika Malagasy. Soa fianatra ka matetika ny fiainan’ny olona amin’ny firenena mandroso no irintsika sy tarafintsika. Firy amintsika anefa no mandinika fa mila fitsipi-pifehezana (discipline) sy famatorana ny fahatongavana amin’ny fivoarana fa tsy kisendrasendra – indridra fa ny mihazona azy mba haharitra?
5° Mitaky mangarahara sy fahamarinana kanefa mikolikoly
Betsaka ny mangetaheta fiainana hanjakan’ny lalàna sy fandriampahalemana kanefa firy amintsika no mandray anjara mivantana isan’andro mampibiloka ny fahamarinana amin’ny alalan’ny tsolitra isan-karazany? Efa lasa rafitra mipetraka eo amin’ny fiaraha-monina sy fitsipika mandeha ho azy ve ny manome “dité” ny mpitandro filaminana na manipy “mimi” kely mba hampandeha haingana ny raharaha atao na ahazoana tombony hafa? Izay manam-komena ihany ve izany no tompon’ny fahamarinana?
6° Be firariantsoa fa be fialonana
Firy ny firariantsoa natao ary koa voaraitsika? Fomba tsara sy tokony atao ny mifampirary soa. Mamporisika ny hafa hivoatra sy maniry fahasoavana eo amin’ny fiainany. Fa ny mahagaga sy mahavariana dia tsy vitsy amintsika mpirary soa no feno fitsiriritan-dratsy sy fialonana ka maniry ny hafa ho lavo. Tsy vitsy rahateo aza moa ireo olona izay tsy mifampiditra an-trano fa matahotra “mosavy” vokatry ny fialonana. Fombafombam-pifandraisana fotsiny ihany ve ny firariantsoa sa tena faniriana mafy vokatry ny fo?
7° Tia mifandray aman’olona fa mihatsaravelatsihy
Miara-manaiky isika rehetra amin’ny ankapobeny fa fombatsika sy efa rà mikoriana amintsika ny fitiavana mifandray aman’olona na eto an-toerana na amin’ny sehetra iraisam-pirenena. Ny fitsiky “Colgate” sy ny fitsikin’ny Malagasy ary efa mila hitovy laza! Ao koa ny fitiavana tia mizara ka na valala iray aza hifanapahana: manasa rehefa hisakafo na aiza na aiza, ets. Firy amintsika no manasa olona nohon’ ny “fomba” fa ny ao am-po mangidy ihany? Firy no mitsiky kanefa kobay an-kelika ihany? Firy no tsy mifidy tavan’olona? Mazava ho azy fa tsy ny fifandraisana aman’olona no lesoka fa ilay fihatsarabelatsihy izay mamotika ny tsirairay, ny fianakaviana, ny fiaraha-monina ary ny firenena.
Ireny karazana toetra mifanohitra ireny dia miteraka tsy fifampitokisana sy ahiahy eo amintsika samy Malagasy. Samy manana ny fomba fiady hivoahana sy hioarana amin’ny fiainana ny tsirairay fa na tiana na tsy tiana dia manana fiantraikany amin’ny maha-olona ny tontolo izay mamolavola azy. Mahita fomba fisainana hafa ve ianao izay manjaka eny amin’ny fiaraha-monina misy antsika? Mahafa-po anao ve ny fiaraha-monina misy anao? Raha afaka manova zavatra ianao androany dia inona no toe-tsaina tianao ovaina?
« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » Ghandi
Cette entrée a été publiée le samedi 14 avril 2012 à 3:29 et taguée "Gasy impact", "Malagasy Dream", Andavanandro, Asa fitadiavana, Blog Gasy, Fahendrena Malagasy, Fandrosoana, fiaraha-monina malagasy, Fihavanana, firaisankina, Fivoarana, Fomba Fisainana, gasy tia resaka, goragora, Kolikoly, Kolo-tsaina Malagasy, Madagasikara, Malagasy mivoatra, Mangarahara, Ory hava-manana, Soatoavina, Tanindrazana, Tia sehoseho, Toe-tsaina, Tsolitra et publié dans Education, Lahatsoratra Malagasy, Social, Uncategorized.	Vous pouvez suivre les commentaires liés à cette entrée par flux RSS 2.0.
" Madagascar 29 Mars 1947 : 89.000 Morts, on n’oublie pas !
Culte de la Personnalité ou Hypnotisme Collectif: Les Malgaches sont-ils S.M.A.R.T? »
7 responses to “Mampivoatra ve ny fiaraha-monina Malagasy? Aiza ny toeranao amin’ireto toetra 7 ireto?”
[…] mahazatra ny hoe: “Tsy fantatr’ialahy angaha ‘zaho?”. Aiza moa no handeha amin’ny laoniny ny fiaraha-monina eto amin’ny […]
Zanak’Antitra sa Zaza Mahiratra | Gasy ImpACT
31 octobre 2014 at 11:06
[…] afaka hivelatra lavitra sy mandray zavatra betsaka ny sain’ny ankizy rehefa tsy voapepo lava. Ny fiaraha-monina misy azy ireo no mametra ny fivoarany araka ny tokony ho […]
[…] ny fahendrena Malagasy, potika ny toe-tsaina, lasa lomorona ny fiaraha-monina misy […]
Tsaho + Tondromolotra = Armes de destruction massive gasy | gasyimpact
22 février 2013 at 2:45
[…] fa isika Gasy dia havanana amin’ny fitiavan-dresaka. Isika rahateo niaina sy nifampita ny tantara tamin’ny lovatsofina. Noho izany efa ao anatintsika […]
[…] sy ny fahoriana mianjady amin’ny Malagasy. Kanefa firy amintsika olon-tsotra koa no manana fihetsika sy toetsaina mambotry ny fiaraha-monina ka manampy trotraka ny fahantrana […]
Malagasy Dream sa S.M.P.L ? « gasyimpact
21 janvier 2013 at 10:09
[…] ka mametraka ny tanjona sy rafitra matotra ary toe-tsaina mifanaraka amin’izany mba hanana fiaraha-monina mampivoatra sy miteraka […]
Fihavanana sa Fahamarinana: safidy sarotra ho an’ny Malagasy! « gasyimpact
3 juin 2012 at 9:14
[…] fametraka eto ny hoe “Mampivoatra ve ny fiaraha-monina Malagasy?”, inona no lafy tsarany amin’ny kolontsain-tsika Malagasy izay tokony hotrandrahana mba […]